सुन तस्करका कारण प्रहरीको टाउकाे दुख्यो ! – Everest Dainik – News from Nepal
सुन तस्करका कारण प्रहरीको टाउकाे दुख्यो !
काठमाडौं, असार १८ । सुन तस्करीका पछिल्ला दुई घटनाले प्रहरीलाई थप चुनौति बढेको छ । एकपछि अर्को गरी तस्करीका घटना बाहिर आउन थालेपछि चुनौती बढेको हो । यी दुई घटनाले प्रहरीको मुटु नै हल्लाएको छ । मुटुमात्र होइन लगातार सुन घटना बाहिर आउनथाले पछि बरामत गर्दागर्दै टाउकोसमेत दुखेको छ ।
संगठित सुन तस्करीबारे विशेष समितिले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका बेला सुन तस्करीका यी दुई घटनाले प्रहरी अझैं सुन तस्करी बढि रहेको देखाउँछ । महानगरीय प्रहरी वृत्त नागढुंगाले काठमाडौंबाट सुन लिएर महेन्द्रनगर हुँदै भारत जान लागेको भारतीय नम्बरको कारबाट १६ गते तीन केजी सुन बरामद गर्‍यो।
त्यसको भोलिपल्टै आइतबार रसुवाको केरुङ नाकाबाट मोटरसाइकलमा काठमाडौं छिर्दै गरेका तेन्जिङ तामाङलाई नागढुंगाबाटै प्रहरीले ६ केजी सुनसहित पक्राउ गर्‍यो। एक दिनको अन्तरमा भएका यी दुई घटनाले संगठित सुन तस्करीमाथि गम्भीर अनुसन्धान चलिरहे पनि तस्करी नरोकिएको पुष्टि गरेको छ। यी दुवै घटनामा तस्कर समूहले फरकशैली प्रयोग गरेको देखिन्छ। कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: gold, सुन घटना